2018 – Year – Alpha Premium
9-1-1 9-1-1 ဟာ မြန်မာပြည်က ကူညီပါရစေ လိုပါပဲ 9-1-1 အုပ်စု မှာ အရေးပေါ် တယ်လီဖုန်းလိုင်းက အော်ပရေတာတွေ ကနေ တဆင့် အမှုအခင်း – သဘာဝဘေး စတဲ့ ပြသနာ ပေါင်းစုံကို ဆယ်သွယ်အကူအညီတောင်းတဲ့ အခါ မီးသတ် – ရဲ – ဆေးဘက်အကူအညီ နှင့် အပြေးအလွှားကယ်ဆယ်ကြပါရတယ် ဒီ 9-1-1 ဇတ်လမ်းတွဲမှာတော့ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်စဉ်လေးတွေကို Episode တစ်ခုစီ အပြီးအစီး ပြထားတာမို့ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် မဖြစ်ပါဘူး ဇတ်လမ်းတွဲထဲက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်စီတိုင်းရဲ့ သဘာ၀ ကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကြောင့် ဇတ်လမ်းတွဲဟာ ပိုမိုပြီး အသက်ဝင်နေပါတယ်
TMDb: 7.9/10 712 votes
The Rain Season 1+2+3 Complete The Rain ကို ကြည့်မိတော့ လက်ရှိကမ္ဘာကိုတောင် ပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ်။ လက်ရှီမှာ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ဘေးသင့်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး၊ ဖြေဆေးမရှိသေးတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုပေါ့။ အဆိပ်သင့်မိုးရေတွေရဲ့ နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းတွဲကတော့ August လ ၆ ရက်နေ့က ပြသခဲ့ပါပြီ။ ဒီအပိုင်းမှာတော့ ရက်စ်မက်စ် တို့ မောင်နှမကြားက ပဋိပက္ခအနေနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကို သတ်နိုင်တဲ့ဆေးရော ပေါ်လာပါ့မလား? ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို မွေးပြီး ဗိုင်းရပ်စ် သတ်နိုင်ဖို့ပဲ ဆက်ကြံစည်ကြဦးမှာလား? ဇာတ်သိမ်းတွဲဆိုတာနဲ့အမျှ ဇာတ်ရှိန်က တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုတော့ အားရမယ် အားမရဘူးဆိုတာတော့ ပရိသတ်ကြီးပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။ The Rain ကို ၾကည့္မိေတာ့ လက္ရွိကမာၻကိုေတာင္ ျပန္ျမင္ေယာင္မိပါတယ္။ လက္ရွီမွာ ကိုဗစ္ဗိုင္းရပ္စ္ေဘးသင့္ေနတဲ့ ကမာၻႀကီး၊ ေျဖေဆးမရွိေသးတဲ့ ကမာၻႀကီးကိုေပါ့။ အဆိပ္သင့္မိုးေရေတြရဲ႕ ေနာက္ဆုံးဇာတ္သိမ္းတြဲကေတာ့ August လ ၆ ရက္ေန႔က ျပသခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ ရက္စ္မက္စ္ တို႔ ေမာင္ႏွမၾကားက ပဋိပကၡအေနနဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာပါ။ ဗိုင္းရပ္စ္ကို သတ္ႏိုင္တဲ့ေဆးေရာ ေပၚလာပါ့မလား? ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကို ေမြးၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ သတ္ႏိုင္ဖို႔ပဲ ဆက္ႀကံစည္ၾကဦးမွာလား? ဇာတ္သိမ္းတြဲဆိုတာနဲ႔အမွ် ...
Siren Season 1+2+3 Complete Siren နဲ့ mermaid က အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားပါတယ်.. Mermaid ကတော့ ရေသူမလို့ လူအများသိထားတဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာသတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်…Mermaid ဆိုတာက လူတစ်ပိုင်း ငါးတစ်ပိုင်းသတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်… Siren ကတော့ လူတစ်ပိုင်း ငှက်တစ်ပိုင်းသတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်… Siren နဲ့ mermaid ဟာ ၁၆ ရာစုနှစ်လောက်ကစပြီးလူသိများခဲ့ပါတယ်..နှစ်ကောင်လုံးကတော့ သင်္ဘောသားတွေကို သီချင်းသီဆိုသံတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ကြတယ်တဲ့.. siren ကတော့ evil ပိုဆန်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်… ဒီအကောင်တွေ တကယ်ရှိမရှိတော့ ဘယ်သူမှ အတိအကျမသိကြပါဘူး… Siren ဇာတ်လမ်းမှာတော့… ပြောရလွယ်အောင် ရေသူမလို့ပဲ အလွယ်ပြောပါရစေ… ရေသူမတစ်ကောင်ကို ငါးဖမ်းသမားတွေဖဖမ်းမိကြပါတယ်… ဒီလို ရေသူမရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို စစ်တပ်က ကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်.. ငါးဖမ်းသမားတွေ ရေသူမကို ဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာပဲ စစ်တပ်က ရောက်လာပြီး ရေသူမကို ယူသွားပါတယ်… သုတေသနပြုလုပ်ဖို့ပါ… ဒီအချိန်မှာပဲ အစ်မဖြစ်သူ ရေသူမကို ဖမ်းသွားတဲ့အတွက် ညီမဟာ ကုန်းပေါ်တက်ပြီး သူ့အစ်မကို လိုက်ရှာပါတယ်… လိုက်ရှာရင်းနဲ့ ရေကြောင်းသုတေသနဌာနမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဘန်နဲ့ ရေသူမ ဆုံပါတော့တယ်… ရေသူမ နာမည်က ...
TMDb: 7.7/10 1093 votes
Siren Season 1+2+3 Complete
Legacies Season 1+2 2009 ခုနှစ်စတင်ပြီး ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ The Vampire Diaries ဟာဆိုရင် Season ၈ ခု နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး လူအများနှစ်သက် သဘောကျတဲ့ TV show ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … ၂၀၁၃ မှာ သူ့ရဲ့ Spinoff လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ကောင် တစ်ခုပေါ် အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားသော The Originals ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ် … The Originals ဟာလည်း လူကြိုက် အလွန်များခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ နှစ်လည်လောက်မှာတော့ မျိုးဆက်သစ်တွေ မွေးဖွားလာတဲ့နဲ့အလျှောက် နိဂုံးချုပ် နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ် … Legacies ဟာ The Vampire Diaries နဲ့ The Originals ရဲ့ Spinoff တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် … Legacies ထဲမှာ မူရင်း သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်လည်းဖြစ် ဝံပုလွေလည်းဖြစ်ပြီး ...
TMDb: 8.4/10 670 votes
Legacies Season 1+2